အတုတွေပေါ တဲ့ နိုင်ငံမှာ ဗုံးကလဲ အတု ပါတဲ့… CB ဘဏ်ဖြစ်စဉ် နောက်ဆက်တွဲသတင်း – GuGuGarGar
Shwe | February 7, 2020 | Local News | No Comments
Clear ဖြစ်သွားပါပြီ.. ဗုံး ရှင်းလင်းရေး ကွန်မန်ဒို (ဝတ်စုံတွေကတော့ မိုက်) အဖွဲ့လဲပြန်သွားပါပြီ (ဗုံးလဲသိမ်းသွားပါပြီ)…. ဖြစ်စဉ်မှာ…
ထောင်ထားခဲ့သော ဗုံး မှာ အတုဖြစ်နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည်ဟု မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်- ၁ မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ထွန်းနိုင် ပြောသည်။
CB ဘဏ်ဖြစ်စဉ် နောက်ဆက်တွဲသတင်း
“လုံ/ နယ်ဝန်ကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကုန်လုံးက ဘဏ်ထဲထောင်ထားတဲ့ ဗုံးကို စစ်ကြည့်တာလေ မိနစ်ပိုင်းပဲကြာတယ် အခုပြီးသွားပြီဗျ။ ဗုံးက အတုဖြစ်နေတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၇.၂.၂၀၂၀ နံနက် ၈ နာရီ ၅၅ မိနစ်ခန့် အချိန်တွင် ငွေအပ်မည်ဟု ယူဆရသူ အမည်မသိ လူသုံးဦး Mask တပ်ထား (ဝူဟန်ကိုခုတုံးလုပ်) သူတို့သည် ဝန်ထမ်းများဝင်သည့် ဘေးတံခါးပေါက်မှ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း ကိုသော်ဇင်နှင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ မသက်မွန်အေး (အငယ်တန်းလက်ထောက်)အား သေနတ်ပြ ခြိမ်းခြောက်ကာ ငွေကျပ် သိန်း ခြောက်ရာ (၁၀၀၀၀ တန်အရွက် ၆၀၀၀) ခန့် ကိုယူငင်၍ ဘဏ်တွင် ဗုံးနှစ်လုံး ထောင်ထားခဲ့ကာ Probox Taxi CC-9965 ဖြင့် အဏ္ဏဝါလမ်းဘက်သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ယာဉ်ထိမ်းတပ်ဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့၊ မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များ အချိန်မှီ ရောက်ရှိလာပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရှင်းလင်းရေးများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကာ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၃ မိနစ် အချိန်တွင် စိတ်ချရသော အခြေနေတစ်ခုကို ထိမ်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသော တရားခံများအား CCTV များမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ အသီးသီးသို့ သတင်းပို့ဆောင် ၍ခြေရာခံ လိုက်လံဖမ်းစီးလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းအစုံလင်ပါခင်ဗျာ…
နောက်ဆုံး သတင်းအရ ထွက်ပြေးသွားသူများဟာ CC-9965 probox အဖြူရောင်ယာဉ်မှ 2F-7263 ပြောင်းလဲ၍ ဆက်လက်ထွက်ပြေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်…
Clear ဖွဈသှားပါပွီ.. ဗုံး ရှငျးလငျးရေး ကှနျမနျဒို (ဝတျစုံတှကေတော့ မိုကျ) အဖှဲ့လဲပွနျသှားပါပွီ (ဗုံးလဲသိမျးသှားပါပွီ)…. ဖွဈစဉျမှာ… ထောငျထားခဲ့သော ဗုံး မှာ အတုဖွဈနကွေောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ရသညျဟု မွောကျဒဂုံမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ- ၁ မှ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးတငျထှနျးနိုငျ ပွောသညျ။
“လုံ/ နယျဝနျကွီးနဲ့ သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ အကုနျလုံးက ဘဏျထဲထောငျထားတဲ့ ဗုံးကို စဈကွညျ့တာလေ မိနဈပိုငျးပဲကွာတယျ အခုပွီးသှားပွီဗြ။ ဗုံးက အတုဖွဈနတေယျ” ဟု ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ ၇.၂.၂၀၂၀ နံနကျ ၈ နာရီ ၅၅ မိနဈခနျ့ အခြိနျတှငျ ငှအေပျမညျဟု ယူဆရသူ အမညျမသိ လူသုံးဦး Mask တပျထား (ဝူဟနျကိုခုတုံးလုပျ) သူတို့သညျ ဝနျထမျးမြားဝငျသညျ့ ဘေးတံခါးပေါကျမှ ဝငျရောကျခဲ့ပွီး လုံခွုံရေးဝနျထမျး ကိုသျောဇငျနှငျ့ ဘဏျဝနျထမျးဖွဈသူ မသကျမှနျအေး (အငယျတနျးလကျထောကျ)အား သနေတျပွ ခွိမျးခွောကျကာ ငှကေပျြ သိနျး ခွောကျရာ (၁၀၀၀၀ တနျအရှကျ ၆၀၀၀) ခနျ့ ကိုယူငငျ၍ ဘဏျတှငျ ဗုံးနှဈလုံး ထောငျထားခဲ့ကာ Probox Taxi CC-9965 ဖွငျ့ အဏ်ဏဝါလမျးဘကျသို့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားခဲ့ပါသညျ။
ထို့နောကျ မွနျမာနိုငျငံ ရဲတပျဖှဲ့၊ ယာဉျထိမျးတပျဖှဲ့၊ မီးသတျတပျဖှဲ့၊ ကွကျခွနေီတပျဖှဲ့၊ မိုငျးရှငျးလငျးရေးအဖှဲ့မြား အခြိနျမှီ ရောကျရှိလာပွီး အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ ရှငျးလငျးရေးမြား ပွုလုပျဆောငျရှကျကာ မွနျမာစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁၁ နာရီ ၃၃ မိနဈ အခြိနျတှငျ စိတျခရြသော အခွနေတေဈခုကို ထိမျးခြုပျထားနိုငျပွီဖွဈပွီး ထှကျပွေးတိမျးရှောငျသှားသော တရားခံမြားအား CCTV မြားမှတဈဆငျ့ သကျဆိုငျရာ နယျမွေ အသီးသီးသို့ သတငျးပို့ဆောငျ ၍ခွရောခံ လိုကျလံဖမျးစီးလြှကျရှိကွောငျး သတငျးအစုံလငျပါခငျဗြာ… နောကျဆုံး သတငျးအရ ထှကျပွေးသှားသူမြားဟာ CC-9965 probox အဖွူရောငျယာဉျမှ 2F-7263 ပွောငျးလဲ၍ ဆကျလကျထှကျပွေးနကွေောငျး သတငျးရရှိပါတယျ… ဓါတျပုံရဲမနျ ရာပွညျ့ Zarni Tike